Funa unikezelo lweenkonzo zoluntu olungenamakhwiniba - Amanda.mobi isiXhosa
Funa unikezelo lweenkonzo zoluntu olungenamakhwiniba
Wawukhe weva okanye wabona izivumelwano zomsebenzi phakathi kukaMaspala wakho neenkampani eziqashelwe ukwenza umsebenzi naye (ii-Service Level Agreements)? Awazi ukuba yintoni oku? Isk’ingathi abo sibonyulela ukusimela njengeeNkonkeli barhalela ukuba sihlale singazi nto malunga noku. i-Municipal Systems act ithi ezi zivumelwano zomsebenzi neenkampani zifanele kukupapashwa zaziwe ngabantu  ukuze abantu abafana nam nawe bangatsho bazi ukuba ngubani, owenza ni, nini, kwaye oko akwenzayo kubiza malini. Kodwa uyakufumanisa ukuba oku akwenziwa ngooMaspala bethu zwelonke. Oku kubangela ukuba uboqhophololo norhwaphilizo bande.
Kodwa singakutshintsha oku, abo bazigqatsela ukuba ngooCeba kolu lonyulo bafuna ukuvotelwa kwaye xa bethetha bathembisa ukulwa norhwaphilizo bazise nempilo engcono kubemi. Kungoko ke kubalulekile ukuba sibabuze bonke abagqatswa kolu lonyulo ukuba bangazibophelela na ekuqinisekiseni ukuba xa bengena, bayakuqinisekisa ukuthi zonke izivumelwano zomsebenzi neenkampani ezikhethiweyo ziyapapashwa, uluntu lwazi ngazo kubo bonke ooMaspala.
Xa sithetha ngazwi-nye singabantu base Mzantsi-Afrika ngazo zonke izinto ezidl’umzi ezayamene ikakhulu nentlalo-ntle yoluntu kunye nobulungisa, siba namandla okuqinisekisa ukuba abo basiphetheyo bayazigcina izithembiso zokwenza impilo yabantu ngcono kwaye benza izinto ezinxamnye nobulungisa.
Thina singabantu baseMzantsi-Afrika simemelela kuni ukuba nizibophelele ekutheni nakulwazisa uluntu ngezivumelwano zomsebenzi phakathi koo-Maspala enikubo neenkampani eziqashelwe ukwenza umsebenzi kooMasipala abo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba akubikho makhwiniba nazintsolo ezibhekiswe kooMaspala. Xa unxibelelwano phakathi kwenu nabo banonyulileyo lungaqinanga, oku kungabangela iyantlukwano yandise nomsantsa ongade ukhokelele ekuchasweni kwako konke enikwenzayo ekuhlaleni ngabantu. Kubalulekile ke ngoko ukusebenzisana noluntu kwaye nizame ngandlela zonke ukubaquka kwimizamo eniyenzayo ekuphuculeni imeko zabo kunikezelo lweenkonzo. Ngalo ndlela sakube siqinesekisa ukhuseleko lwako konke osekwenziwe kuphuhliso loluntu.
Njengoko abo sakube sibonyulile ukuba baxhuzule imikhala kooMasipala bethu beza kuqala ngomsebenzi wabo, simemelela ukuba bazibophelele ekuqinisekiseni ukuba xa bengena, zonke izivumelwano zomsebenzi neenkampani ezikhethiweyo ukuba zakheokanye zisebenze ekuhlaleni, zakupapashwa, uluntu lwazi ngazo kubo bonke ooMaspala.